सबै पार्टीले बुझाए मन्त्री बन्ने नेताको लिष्ट, कहिले हुन्छ सपथ ? — Imandarmedia.com
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातमा सबै पार्टीका नेताहरुको लिष्ट आइपुगेको छ । लिष्ट आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाका सारथीहरुको अन्तिम लिष्ट बालुवाटार पुगेपनि मंन्त्रालयको टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको सुरुवाती समयमा नै दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डा गरिएको भएपनि अहिले त्यो भागन्डामासमेत केही समस्या देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलका सबै सांसदहरुले मन्त्रिपरिषद्मा जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि शिर्ष नेताहरु अहिले दबावमा रहेको छ ।
तर, अहिलेसम्म दलहरुले मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेपनि दलबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेको नाम तयारी गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेसले ५ जना मन्त्री बनाइसकेको छ भने अब नयाँ ३ जना थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. मिनेन्द्र रिजाल र उमाकान्त चौधरीको नाम फाइनल भएको छ ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकोमा २ जना मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ भने अब ४ जना पठाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको लागि देवेन्द्र पौडेल, महेश्वार गहतराज, शशि श्रेष्ठ, सुदन किराँतीलाई पठाउने भएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ६ वटा मन्त्रालय पाएकोमा नाम टुङ्गो लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाई सकेको छ । नेकपा एसले विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाई सकेको छ । भने भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठमध्ये एक जना मन्त्री हुने छ ।
जसपाले भने अहिलेसम्म क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाइ सकेको छैन । तर, राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ ।तर, गठबन्धन दलहरुबीच कुन–कुन मन्त्रालय क–कसले लिने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन । शुक्रबारभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी रहेको छ ।